» आज सरस्वति पुजा, वसन्त पञ्चमीमा गर्न नहुने कुराहरु…
आज सरस्वति पुजा, वसन्त पञ्चमीमा गर्न नहुने कुराहरु…
४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:४२
काठमाडौं । आज बसन्त पञ्चमी पर्व हो। ज्ञानको देवी, देवी सरस्वतीको पर्व धूमधामका साथ मनाइन्छ। बसन्त पंचमी माघ महिनाको शुक्लपक्षको पञ्चमीमा हरेक वर्ष मनाइन्छ।
ग्रेगोरियन क्यालेन्डरका अनुसार यो चाड जनवरी वा फेब्रुअरी महिनामा पर्दछ। बसन्त पञ्चामी ज्ञानको देवी माता सरस्वतीलाई समर्पित छ। यस दिन माता सरस्वतीको पूजा गर्ने चलन छ । सरस्वती मातालाई ज्ञान, कला र संगीतको देवी भनिन्छ।
पचमी तिथि मंगलबार बिहान साढे ३ बजे सुरु भएको छ, जुन बुधवार बिहान ५ बजेर ५८ बजेसम्म रहनेछ। मंगलबार ११.३० देखि १२.३० को बीचमा सरस्वती पूजाको सबैभन्दा उत्तम शुभ समय छ ।
यस पटक बसन्त पञ्चमीको अवसरमा रवि योग र अमृत सिद्धि योगको विशेष संयोजन बनाईएको छ। दिनभरि रवि योगको उपस्थितिको कारणले यसको महत्व बढेको छ। उपासनाको शुभ समय बिहान ६ बजेर ५९ देखि दिउँसो १२ बजेर ३५ मिनेट सम्म हुन्छ। यस मुहूर्तमा पूजा गर्दा अधिक लाभ हुन्छ।
धार्मिक मान्यता अनुसार यसै दिन माता सरस्वती प्रकट हुनुभएको थियो । यसै कारणले मांता सरस्वतीको पूजा बसन्त पंचमीमा गरिन्छ। यस दिन विवाह, गृह प्रवेश जस्ता शुभ चीजहरू गर्नु शुभ मानिन्छ। यद्यपि माता सरस्वतीको आराधनाको दिनमा, केही महत्त्वपूर्ण चीजहरूको विशेष ध्यान राख्नु पर्दछ, जुन मानिसहरूले प्रायः बेवास्ता गर्दछन्। त्यसकारण यस दिनमा केहि चीजहरूको ख्याल गर्नुपर्छ।
देवी सरस्वतीको मूर्ति वा मूर्तिलाई पहेंलो रंगको लुगा चढाउने । रोली, चन्दन, हल्दी, केसर, चंदन, पहेलो वा सेतो फूलहरू, पहेंलो मिठो र अक्षुण्ण चढाउने । पूजा स्थानमा उपकरण र पुस्तकहरू चढाउने । माता सरस्वतीको वन्दना पाठ गर्ने । यदि विद्यार्थीहरू हो भने आज उनीहरूले माता सरस्वतीको लागि व्रत बस्दा राम्रो हुन्छ ।
धार्मिक मान्यता अनुसार पहेलो र सेतो प्रसाद माता सरस्वतीलाई चढाउनु पर्छ। भक्तजनहरुलाई खिचडीको प्रसाद वा खीरको प्रसाद बाँड्दा राम्रो हुन्छ । यस बाहेक, राज भोग, बुन्डी वा लड्डू र मिक्स तरकारीहरू प्रसादको रूपमा माता सरस्वतीलाई चढाउन सकिन्छ ।
वसन्त पञ्चमीमा गर्न नहुने कुरा–
१. बसन्त पंचमीमा कालो लुगा लगाउनु हुँदैन। यस दिन पहेंलो वस्त्र धारण गर्नु शुभ मानिन्छ।
२. मासु र मदिरा बसन्त पंचमीमा खानु हुँदैन। यस दिन स्नान र आराधना पछि सात्विक खाना खानुपर्दछ।
३. बसन्त पंचमीमा रूखहरू र बोटबिरुवाहरू काट्नु हुँदैन।
कसैसँग झगडा नगर्नुहोस् र कसैसँग रिसाउनु हुँदैन। विश्वास गरिएको छ कि बसन्त पंचमीमा कलहको कारण बुबाहरूले कष्ट भोग्नु परेको छ।
४. यस दिन स्नान नगरी केही पनि खान हुँदैन। यस दिन एक नदी, ताल वा नजिकको पोखरी मा नुहाउनु पर्छ र आमा सरस्वतीको पूजा पछाडि मात्र केही खानुपर्दछ।
५. बसन्त पञ्चमीमा नुहाईकन कुनै काम नगर्नुहोस्। सर्वप्रथम, बिहान उठ्नुहोस् र नुहाउनुहोस् र पूर्ण विधीसहित माता सरस्वतीको पूजा गर्नुहोस् र त्यसपछि मात्र केही काम गर्नुहोस्।
६. वसन्त पञ्चमीको शुभ दिन कुनै पनि व्यक्तिको मनमा नराम्रो सोच नराख्नुहोस्। बरु तपाईको दिमागमा आमा सरस्वतीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।
७. देवी सरस्वतीको पूजाका लागि अधिकांश सामग्रीहरू बसन्त पंचमीमा सेतो रंगको हुन्छन्। त्यसकारण, सरस्वती पूजनमा सेतो कपडा, सेतो चन्दन, दही र बटर, अखंड, सेतो तिल, क्विन्सर प्रयोग गर्नुहोस्।
पहेंलो कपडा लगाउने
बसन्त पंचमीमा पहेंलो रंगको विशेष महत्त्व छ। माता सरस्वतीलाई यो रंग मनपर्दछ। त्यसकारण, यस दिन शिक्षण देवीलाई पहेलो वस्त्र चढाइन्छ । तपाइ पनि माता सरस्वतीलाई खुशी पार्न पहेंलो कपडा लगाउन सक्नुहुनेछ ।